विद्रोह गर्दैमा रातारात मान्छेहरूको मस्तिष्क र व्यवहार परिवर्तन हुने भए पो ? पढेका, बुझेका मान्छेहरू समानता र अधिकारका कुरा गर्छन् । असमान व्यवहार उनीहरू नै गर्छन् ।
‘बिहे गर्नुपर्‍यो । बूढी भइसकिस् ।’ मेरो ममीको बुबाको आमा । अर्थात्, मेरो हजुरबुबाको आमा । हामी उहाँलाई हजुरी भन्छौँ । उहाँ भिडियो कलमा मलाई कराउनुहुन्छ । कुनै कुनै बिहानहरू म राम्री भइनँ भन्ने सुनेरै बिताउनुपर्छ ।
‘यसको बिहे गरेको देखेर मर्न पाए भन्देखुन् । मैले आनन्दले स्वर्गमा बास पाउने थिएँ ।’
उहाँको कुरा पनि ठीकै हो । आठ वर्षको उमेरमै विवाह गर्नुभएकी उहाँ चालीस वर्ष नकट्दै एक्लै पर्नुभयो । उहाँले छोरैछोरा जन्माउनुभएको थियो । छोरीछोरी जन्माउनुभएको भए ? क–कसले, के–के भन्थे होलान् ? कल्पना गर्दा पनि नौ नाडी गलेर आउँछ ।
उहाँको हेरी मेरो विवाहको कुरा नचल्नु शुभ संकेत पनि होइन । एसएलसी सकिएपछि बिहे भइहाल्नुपर्ने थियो । तर भएन । यो कुरामा मलाई पनि पछुतो लाग्छ ।
त्यतिबेला बिहे भएर लगत्तै बच्चा पाइहालेको भए सात वर्षको भइसक्ने थियो । अनि, अर्को बच्चा तीन वर्षको हुने थियो । कहिलेकाहीँ नपाएको बच्चाको कल्पनामा हराउँछु । कहिले नभएको पतिको कल्पनामा हराउँछु ।
अहिले यो लकडाउनमा म किचेन, करेसाबारी, बच्चा, सासूससुरा, पति, देवर सम्हाल्दै बस्ने थिएँ । फेसबुक चलाउन जानेको भए पनि फुर्सद हुने थिएन । भान्साको काममा म यो समयसम्म निपुण बनिसकेकी हुन्थेँ । सासूससुरालाई के मन पर्छ ? के पर्दैन ? बूढाका साथीभाइहरू घरमा आउँदा कसरी भान्साबाट बैठक कोठामा खानेकुरा पुर्‍याउँदा आफूले लगाएको कुर्ताले सपक्क छाती छोप्नुपथ्र्यो भन्ने बुझिसक्ने थिएँ । धेरै परिपक्व भइसक्ने थिएँ ।
विवाह गर्नैपर्ने थियो, मैले ।
मेरो बुबाको आमाले बाह्र वर्षमा बिहे गर्नुभयो । कति मीठो खाना पकाउनुहुन्छ । भान्सा र करेसाबारीप्रतिको उहाँको मोहले म दंग पर्छु । मेरो बिहे पन्ध्रै वर्षमा भएको भए... ? ल भएन रे । अठार वर्ष कट्नेबित्तिकै गरिदिनु पर्थेन ? बिहे गर्न मन लाग्यो भन्ने उमेर भएपछि भन्लान् अनि गरिदिउँला भनेर कुरेर बसेर हुन्छ ?
बिहे गर्न मन भयो भन्न सक्नेले गर्न मन छैन भन्न पनि सक्छन् । किन यति नबुझेका होलान् । मेरा धेरै साथीहरूको दस कक्षा अगाडि, त्यसपछि बचेका साथीहरू बाह्र सक्नुअघि र त्यसपछि बचेका साथीहरू ब्याचलर सक्नुअगावै बिहे गरे ।
ज–जसले ब्याचलर सकाए, उनीहरू मास्टर्स सकाएर गर्छु भन्दै छन् । मास्टर्स पढ्दापढ्दै बिहे गरेनन् भने तिनीहरूको बिहे कहिल्यै हुनेवाला छैन । मास्टर्स सकाएर जागिर या व्यापार, व्यवसायको चक्करमा फस्छन् । फेरि त्यहाँबाट नाफाघाटामा चल्न थाल्छ, जिन्दगी । त्यतिन्जेल मात्तिएर हिँडेका मेरा केटी साथीहरूलाई विवाहले बाँध्न कहिल्यै सक्ने छैन ।
साथीहरू, बिहे गर्ने भए गरिहाल्नु है ?
‘विवाह कसरी हुन्छ ? यसका लागि के–के चाहिन्छ ? एउटी छोरी मान्छे कस्तो बन्नुपर्छ ?’ यस्तो जिज्ञासा पनि मनमा उठ्न सक्छ । यो पूरै पढिसक्दा तपाईंले यसको उत्तर पनि पाइसक्नुहुन्छ ।
तपाईं गोरी हुनुहुन्छ भने राम्रै भयो । सेतो छालाले विवाह गर्नका लागि मद्दत पुर्‍याउँछ । काली अथवा गहुँगोरी हुनुहुन्छ भने पनि केही छैन । गोरो बन्नका लागि अनेक उपाय छन् । ब्युटिपार्लर सहरदेखि गाउँगाउँसम्म त्यसै फस्टाएको छैन । गोरो छालाप्रतिको हाम्रो आकर्षणको परिणाम हो, त्यो । त्यसैको आडमा कति व्यवसाय चलेका छन् । हाम्रो कालो छालाप्रति आकर्षण हुन्थ्यो भने प्रयोगशालामा वैज्ञानिकहरू मान्छेको छाला कसरी कालो बनाउन सकिन्छ भनेर प्रयोग गरिरहेका भेटिन्थे । छालामा हुने मेलानिन तत्त्वलाई अझै बढाएर कसरी कालो बनाउन सकिन्छ भन्ने खोजमा हुने थियो । यो कुरा छाडिदिऊँ ।
‘हामी जे छौँ, त्यहीँ देखाएर किन हिँड्न सक्दैनौँ ? तपाईं मात्रै होइन, म पनि त्यस्तै छु । त्यसरी आफ्नो प्राकृतिक चमक छोपेर कृत्रिमताको चमकमा किन चम्किन खोजिरहेछौँ हामी ?’ अहँ, यस्तो प्रश्न झुक्केर पनि नगर्नू । समाज जेको पछि लाग्छ, हामीले त्यसैलाई पछ्याउनुपर्छ । बुझ्नुभयो नि ? बिहे गर्ने सम्भावित उम्मेदवार पो हो त तपाईं ।
विवाहका लागि सबभन्दा पहिलो सर्त हो, प्रश्न नगर्नु । जे भए पनि आफ्नो भाग्य सम्झेर स्वीकार्नु ।
‘अबदेखि कपाल नकाट् । नाकमा फुली लगा । निधारमा रातो टीका लगा । आँखामा गाजल लगा । ओँठमा के–के जाती पाउँछ, अहिले । त्यो लाली पनि लगा । कानमा अहिले सुनको टप नलगाए पनि बजारिया टप लगाए हुन्छ । तर यसरी बुच्चै नभ् । घाँटीमा सिक्री लगा । सुनको सिक्री बिहे गर्दा किनिदिम्ला । अहिले चाँदीको बनाएरै भए पनि लगा । कपाल लामो बनाएर सर्लक्क बाँध । अगाडि झार्न मन भए थोरै निकाल्नू । अरू सबै सर्लक्क बाँध्नू । बुझिस् नि ?’ हजुरीले यसो भनिन्जेल म सुनेरै बसिरहेकी थिएँ । उहाँको कुरा एकदम ठीक हो ।
अनुहार ऐनामा हेरेको, आफैँलाई विरक्त लागेर आयो ।
‘अनुहारमा दल्ने क्रिम पनि पाउँछ । त्यो पनि लगाउनू । यो मंसिरसम्ममा तेरो बिहे गर्नुपर्छ । यसरी बूढी भएर बसेर हुन्छ ? बूढीकन्या भएरै मर्न मन छ ? यसरी बसेर कहिल्यै मोटाइँदैन । सधैँ यस्तै ख्याउटी हुन्छेस् ?’ हजुरीको कुराले लामो सास लिन्छु । उहाँले आफूले जिन्दगीभर जानेको सुन्दरताको परिभाषा सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो । के नराम्रो भयो र ?
‘जति चिटिक्क पर्छेस्, उति राम्रो केटा पाउँछेस् ।’ उहाँको यो कुराले मन झनै रोमान्चित हुन्छ । केटीको विवाहका लागि पहिलो मापदण्ड भनेकै उसको रूप हो । सुन्दरता हो । त्यसपछि बल्ल अरू कुरा आउँछ ।
केटाहरूलाई पनि तनावै छ । राम्रो कमाउने नभइन्जेल बिहे गर्दैनन् । आफूले मन पराएकी केटीले त्यतिबेलासम्म बिहे गरिसकेकी हुन्छे । आ–आफ्नै अप्ठेराहरू...
‘तँ जत्तिकी राम्री नातिनी मेरा छैनन् । तर तेरो पारा भएन । खाली वैराग बनेर हुन्छ ? कति चिटिक्क बन्नुपर्छ, बिहे गर्नका लागि ? पहेँलो लुगा तँलाई सुहाउँदैन । त्यो फिटिक्कै नलगाउनू । सकेसम्म राता, उज्याला कपडा लगाउनुपर्छ ।’
काला, खैरा रङहरूले मान्छेलाई कहाँ सुन्दर देखाउनु ? हजुरीको कुरा एकदम ठीक हो ।
‘हुन्छ हजुरी । म अब त्यसै गर्छु ।’ बिहानभर यस्तै कुरा गरेपछि मैले अन्तिममा सहमति जनाएँ । उहाँ धेरै खुसी हुनुभयो । हजुरबाले सम्झाउँदा–सम्झाउँदा थाकेर मलाई सुधार्ने जिम्मा हजुरीलाई दिनुभएको थियो । उहाँ राम्रोसँग सुन्न पनि सक्नु हुन्थेन । मैले कुरामा असहमति जनाएँ या सहमति भनेर सुनाउनका लागि हजुरबा हुनुहुन्थ्यो । हजुरबा पनि मेरो कुराले मख्ख पर्नुभयो ।
‘जति कुरा गरे पनि यस्तै हो । अब सधैँ राम्री भएर बस्नू । बुच्चै भएर होइन । म जतिबेला पनि फोन गर्न सक्छु । राम्री हुन मन लाग्दैन ? किन हो ? फोन गरेरै भन्नुपर्ने ? अब हामीले भनेको कुरा पनि मान्नुपर्‍यो । छट्पटाएर हिँड्ने होइन ।’
‘हुन्छ ।’ फोन राख्न पाउने खुसीले मैले मुस्कुराउँदै जवाफ दिएँ ।
‘तेरो हाँसो कति राम्रो हो । हाँसेको राम्रो देखिँदो रहेछ । खितिति नहाँस्नू । छोरा मुन्छे देखेसी शिर निहुराउनू । ठाडठाडै हेर्ने होइन । नभए संस्कार नभएकी भन्छन् ।’ हाँसोबारे आफूले जानेको गुह्य रहस्य खोल्नुभयो ।
भिडियो कल गरिसकेपछि मैले आफ्नो बिहेबारे धेरै बेर सोचेँ ।
‘बिहे गर्नू न दिदी । झन् खोजिदिने भन्नुभएको छ । मेरो पालामा त्यस्तो कसले भन्ला ?’ मेरो विवाहबारे चिन्ता गरेर टाउको दुखाउने र ज्यान सुकाउने हजुरबा, हजुरआमालाई के भन्नु ? उहाँहरूले भनेको नमानिरहनु ? मैले मान्नुपर्छ ।
मेरो प्लस टु पढ्दै बिहे भएको भए ? मेरो ब्याचलर नसकिँदै बिहे भएको भए ?
मलाई धम्की या लोभ देखाइदिएको भए, बिहे गरिसक्ने थिएँ । कहिलेकाहीँ आफैँसँग प्रश्न गरिबस्छु, विवाहको राजनीति नजान्दै बिहे भइसकेको भए ... । भान्सामै अल्झिएको भए... मसँग विवाह गर्ने पुरुष कति भाग्यमानी हुन्थ्यो । म उसका कुरा चुपचाप मान्थेँ । ऊ पनि मलाई माया गरेको नाममा घरका सारा कामधन्दाहरू जिम्मा लगाएर अफिसमा मस्त रहन्थ्यो । कहिलेकाहीँ अधिकार जताएर माग्ने सारी, गरगहनाका लागि उसले गर्ने अतिरिक्त मिहिनेत र कमाइमै म अल्मलिन्थेँ । उसले कमाएर पुर्‍याइदिने भएपछि मैले कमाइरहनु परेन । कति रमाइलो !
कहिलेकाहीँ आफैँसँग प्रश्न गरिबस्छु, विवाहको राजनीति नजान्दै बिहे भइसकेको भए ... । भान्सामै अल्झिएको भए... मसँग विवाह गर्ने पुरुष कति भाग्यमानी हुन्थ्यो । कहिलेकाहीँ अधिकार जताएर माग्ने सारी, गरगहनाका लागि उसले गर्ने अतिरिक्त मिहिनेत र कमाइमै म अल्मलिन्थेँ ।
उसले भनेजसरी शृंगारिएर बस्थेँ । ऊ कति बेला आउला र खाना खाउँला भनेर पर्खिबस्थेँ । जिन्दगी यस्तो पो हुन्छ । प्रीति यस्तो पो हुनुपर्छ त । जतिबेलै उसैको सम्झना । तरकारी पकाउन लाग्यो, उसलाई के मन पर्ला ? फेरि उसलाई मीठो लागेन भने ? हिजो ओछ्यानमा हुँदा मैले किन उसलाई इन्कार गरेँ हुँला ? त्यस्तो गर्नुहुन्न । आज ऊ आएपछि मीठो परिकारले उसको मन जित्छु । आखिर म उसैकी हुँ । उसलाई मन भएका बेला आफैँलाई तयार गर्न नसक्नु मेरै कमजोरी हो ।
‘ओछ्यानमा असन्तुष्ट पुरुषको नजर बाहिरतिर जान्छ । त्यहीँ भएर आफूलाई जहिल्यै समर्पित गर्नू । नाइँनास्ती नगर्नू ।’ हजुरीको कुरा सम्झिएर आत्मग्लानिले फतक्कै हुन्थेँ । कहिले बच्चाहरू हातमा खेलाउँदै महान् आमा बन्न सकेकामा मख्ख पर्थें । बच्चाहरूका लागि मैले आफूलाई समर्पित गरेकी छु । यिनीहरूका लागि दु:ख गरेको कुरा बुझ्लान् नि भन्दै मन बुझाउँथेँ ।
म मात्रै हो र ? सबैको वैवाहिक जीवन यस्तै त हो । बाहिरबाट हेर्दा चम्किलो, भित्र कालो । पीडा र छटपटीका आँसुहरू । अहँ, म यस्तो सोचेर पनि विद्रोह गर्दिनथेँ ।
‘पति भनेका भगवान् हुन् । पतिको सम्मान जहिल्यै गर्नू ।’ अरूहरूको अगाडि पतिका बारे कहिल्यै नराम्रो नबोल्नू । मलाई सिकाइएका स्कुलिङका कारण पनि आफ्नो कुरा सधैँ पटुकीमा पोको पारेर राख्थेँ । सहनशील बन्थेँ ।
म धेरै व्यावहारिक भइसक्ने थिएँ । प्रेम भनेर देखाउने पुरुषहरूको गुह्य रहस्य पनि बुझ्ने थिएँ । उनीहरूले कसरी प्रेमको नाममा आफ्नो अहंतालाई महत्त्व दिन्छन् भन्ने बुझ्ने थिएँ । म यी सबै कुराबाट अनविज्ञ छु । साँच्चै मैले किन विवाह गरिनँ ?
मेरा केही साथीहरू घर र अफिस भ्याएका छन् । कति जाँगरिला हुन् । तर उनीहरू मलाई फिटिक्कै मन पर्दैन । कस्तो दम्भ र उद्दण्ड स्वभावका छन् । यसो केही भइहाल्यो कि घरमा रडाको मच्याउँछन् । हाम्रा आमाहरूले पनि घर र खेतबारी भ्याएकै हुन् । कहिल्यै चर्को स्वर सुन्न पाइएन । बुबाप्रति सधैँ कृतज्ञ । सधैँ सम्मान । सधैँ प्रेम । उनीहरू भने आफ्नै श्रीमान्को खेदो खन्न बेर लगाउँदैनन् । तँभन्दा म के कम भनेर श्रीमान्सँग निहुँ खोज्छन् । डिभोर्सको धम्की दिन्छन् । कसले सिकायो, उनीहरूलाई यस्तो उद्दण्ड बन्न ? किन चुपचाप सहन सक्दैनन् ? तिनले आफ्ना बच्चालाई बुबाका बारे बताउनुपर्दा के भन्लान् ? त्यसले बच्चामा कस्तो छाप पर्ला, बुबाप्रति ?
आमाकै कारणले हामीले बुबालाई देवतासरी देख्यौँ । कहिल्यै नराम्रो गर्नै नसक्ने । गल्ती गर्नै नसक्ने अजीव प्राणी । हामी छोरीहरूका लागि पिता भनेका भगवान्सरह । त्यो सब आमाको कारण बाउले पाएको सम्मान थियो । आमाले बाउको कर्तुत खोल्न सक्थिन् तर कहिल्यै खोलिनन् । सधैँ राम्रा–राम्रा कुरा मात्रै सुनाइन् । बाउको डर मात्रै देखाइन् । बाउको हाउगुजीले गर्दा म आजसम्म उहाँसँग दोहोरो कुराकानी गर्न सक्दिनँ ।
बुबाले यसको बिहे फलानो केटासँग हुन्छ भनेर ममीमार्फत मलाई सुनाएको भए... मैले कसरी नाइँनास्ती गर्न सक्नु ? त्यसमाथि ममीले आँखाभरि आँसु पारेर बुबाले तेरो राम्रोका लागि भनेका हुन् । केटा खासाको छ भनिदिएको भए ... म आफ्नो घर भनेर लोग्नेको घर सम्हालिराख्थेँ । तीज र तिहारमा आउँदा ममीलाई सासूससुराको कुरा लगाउँथँे । तर पतिको कुरा कहिल्यै सुनाउँदिनथेँ । म बरु मेरा पिताजस्ता पति पाउने कर्म रहेनछ भन्दै धिक्कार्थें । यसरी म पनि हजुरीकै उमेरमा पुग्थेँ ।
मसँग सुनाउन केही थान अनुभवहरू हुने थिए । पुरुषहरूको मानसिक चित्रण र विवाहले ल्याएको आर्थिक सुरक्षाका पाटाहरू हुने थिए ।नभए बेलैमा पतिसँग अलग्याइएको अवस्थामा बच्चाहरू हुर्काउनका लागि गरेका संघर्षहरू हुने थिए । धेरै कुराहरू हुने थिए । विवाहले सबै कुरा दिएर कसरी आफ्नै जीवन पनि अरूमा समर्पित गरेर खुसी हुनुपर्छ भन्ने सिक्ने थिएँ ।
हजुरी सुनाउनका लागि मसँग केही छैन । तपाईंले मेरो विवाहको चिन्ता किन यति ढिलो गर्नुभएको ? बूढी भइसकेँ म । यी केही कुरा थाहा नपाउँदै मेरो विवाह हुनुपथ्र्यो । छोरा मान्छेले जे पनि गर्न सक्छन् । छोरी मान्छेले केही गर्न सक्दैनन् । धेरै भए, राम्री भएर सौन्दर्य प्रतियोगितामा भाग लिएर देश–विदेशका अवार्डहरू मात्रै पाउने हुन् । त्यसका लागि पनि भाग्य हुनुपर्‍यो । राम्रो अनुहार र मिलेको शरीर, मापदण्डअनुसारको उचाइ हुनुपर्‍यो । मेरो यस्तो भाग्य कहाँ ! पूर्वजन्ममा पापै गरिएको रहेछ । यो जन्ममा यस्तो कर्म भोगिएको छ । यस्तै भन्दै चित्त बुझाउनेवाला थिएँ । दाजुभाइ, बुबा, हजुरबुबा अनि बिहे गरेपछि बूढा, छोरा, ससुराको कुरा मान्ने थिएँ । उनीहरूले कोरिदिएको नियमको घेरा तोडेर बाहिर चियाउने आँट त परको कुरा । कल्पना पनि गर्न सक्ने थिइनँ ।
म साँच्चै मेरी आमाजस्ती किन भइनँ ? म मेरी हजुरीले भनेजस्तो ज्ञानी बन्न किन सकिनँ ?
मन त लाग्छ, म केही नबुझुँ । जति नबुझ्यो, उति राम्रो । त्यति सहज हुन्छ, जिन्दगी । बुझेर विद्रोह गर्दैमा रातारात मान्छेहरूको मस्तिष्क र व्यवहार परिवर्तन हुने भए पो ? पढेका, बुझेका मान्छेहरू समानता र अधिकारका कुरा गर्छन् । असमान व्यवहार उनीहरू नै गर्छन् । केही राम्रा मान्छेहरू यसैको चपेटामा परेर संक्रमणकालीन अवस्थामा जिन्दगी बिताइरहेका छन् । महिलाले असल छन् भनेर विश्वास नगर्ने अनि पुरुषहरूले महिलाको लंगौटी धुने भनेर खिसीट्युरी गर्ने । आफैँमा संघर्षरत मनुवाहरू कति होलान् ? कति दु:खलाग्दो होला, कसैले आफ्नो नमानिदिँदा । आँखा चिम्लेर असल पुरुष सम्झन खोज्छु, आफ्नै बुबाको अनुहार झल्झल्ती आउँछ ।
मेरी आमाले आँखा चिम्लेर असल पुरुष सम्झिनुपर्दा आफ्ना पति सम्झनुहोला कि आफ्ना पिता ?
विवाह गरेँ भने मैले असल भनेर मेरो बूढालाई भनुँला कि आफ्ना बुबालाई ?
साँच्चै मैले किन विवाह गरिनँ ?